An advanced autofocu - Anglais - Birman Traduction et exemples
Vous avez cherché: an advanced autofocus algorithm for sar (Anglais - Birman)
this strategy was tried for sars with inconclusive results.
ဤမဟာဗျူဟာမှာ sars အတွက် စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး မရေရာသော ရလာဒ်များ ရရှိခဲ့သည်။
live-attenuated vaccines have been evaluated in animal models for sars.
သက်ရှိဗိုင်းရပ်စ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ထုတ်လုပ်ထားသည့် ကာကွယ်ဆေးများကို sars ရောဂါအတွက် တိရစ္ဆာန်များကို အသုံးချကာ အကဲဖြတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
as of 2020, there is no cure or protective vaccine for sars that has been shown to be both safe and effective in humans.
2020 ခုနှစ်တွင်၊ လူများ၌ ဘေးကင်းကာထိရောက်မှုကိုပြသသည့် sars ရောဂါအတွက် ကုသဆေး သို့မဟုတ် ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေး မရှိသေးပါ။
in addition, the maintenance of electrolyte balance, the prevention and treatment of secondary infection and septic shock, and the protection of the functions of the vital organs are also essential for sars-cov-2 patients.
ထို့အပြင် ဒုတိယအဆင့် ကူးစက်မှုနှင့် သွေးဆိပ်တက်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်၊ ကုသရန်အတွက် အီလက်ထရိုလိုက် ညီမျှအောင် ထိန်းသိမ်းထားရန်အပြင် အရေးကြီးသည့် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ၏ လုပ်ဆောင်မှုများကို ကာကွယ်ရန်မှာလည်း sars-cov-2 လူနာများအတွက် အရေးပါသည်။
the who has published several rna testing protocols for sars-cov-2, with the first issued on 17 january.
who အနေဖြင့် sars-cov-2 အတွက် rna စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်အများအပြားအား ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပြီး ပထမဆုံး ထုတ်ပြန်မှုအား ဇန်နဝါရီလ 17 ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
the regular rna assay for sars-cov-2 can be negative in some covid-19 patients.
အချို့သော covid-19 လူနာများတွင် sars-cov-2 ရှိမရှိ ပုံမှန် rna စမ်းသပ်ရာတွင် ရောဂါမရှိဟု ပြနိုင်ပါသည်။
however, it has been reported that masked palm civets from the wild or farms without exposure to the live animal markets were largely negative for sars-cov, suggesting that masked palm civets might only serve as the intermediate amplifying host but not the natural reservoir of sars-cov.
သို့သော်လည်း တောထဲမှ သို့မဟုတ် မွေးမြူရေးခြံထဲမှ ကြောင်ကတိုးများသည် တိရစ္ဆာန်အရှင်ဈေးနှင့် ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ sars-cov ကူးစက်ခံရမှုမရှိနိုင်ကြောင်း တင်ပြထားရှိပြီး ကြောင်ကတိုးများသည် sars-cov ၏ သဘာဝရောဂါပိုလက်ခံရာတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ အလယ်အလတ်အဆင့် ရောဂါတိုးချဲ့လက်ခံသူအဖြစ် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
the vaccine containsaharmless genetic code copied from the virus that causes the disease.antibody dependent enhancement has been suggested asapotential challenge for vaccine development for sars-cov-2, but this is controversial.
ကာကွယ်ဆေးတွင် ရောဂါဖြစ်စေသောဗိုင်းရပ်စ်ထံမှ ကူးယူထားသည့် အန္တရာယ်မရှိသော မျိုးဗီဇကုဒ် ပါဝင်ပါသည်။ sars-cov-2 အတွက် ကာကွယ်ဆေးဖော်စပ်ရာတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောစိန်ခေါ်မှုအဖြစ် ရောဂါကာကွယ်သောပဋိပစ္စည်းကိုမှီခိုသောတိုးပွားမှုကို အကြံပြုထားသော်လည်း ၎င်းမှာ အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
it will also be of interest to determine whether any other coreceptor might be required for sars-cov-2 transmission.
အခြားသော အဓိကရောဂါလက်ခံနေရာသည် sars-cov-2 ကူးစက်ပျံ့ပွားမှုအတွက် လိုအပ်မှုရှိ၊ မရှိကို ဆုံးဖြတ်ရန်မှာလည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်သည်။
diagnosing the confirmed case should base on suspected case with any one item of pathogenic or serological evidence as following: (1) real-time pcr test positive for sars-cov-2; (2) viral whole genome sequencing showing high homogeneity to the known novel coronaviruses; (3) positive for the specific igm antibody and igg antibody to sars-cov-2 in serum test; orachange of the sars-cov-2-specific igg antibody from negative to positive, or titer rising ≥4 times in the recovery phase above that in the acute phase.
အတည်ပြုထားသောဖြစ်စဉ်များကို ရောဂါခွဲခြားစစ်ဆေးခြင်းအား ဖော်ပြပါအတိုင်း ရောဂါဖြစ်ပွားစေသည့်အရာ သို့မဟုတ် သွေးရည်ကြည်လေ့လာမှုဆိုင်ရာသက်သေတစ်ခုခုဖြင့် သံသယရှိသောဖြစ်စေဉ်ပေါ်တွင် အခြေခံသင့်ပါသည်။- (1) sars-cov-2 အတွက် တကယ့်အချိန်အတိုင်း pcr စစ်ဆေးမှုပေါ့စတစ်ဖြစ်ခြင်း (2) သိရှိထားသော နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရှိ မြင့်မားသောအမျိုးတူမှုကိုပြသသော ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ဆိုင်သည့် မျိုးပွားပစ္စည်းနောက်ဆက်တွဲတစ်ခုလုံး၊ (3) သွေးရည်ကြည်စမ်းသပ်မှုတွင် sars-cov-2 ၌ သီးခြား igm ရောဂါကာကွယ်သောပဋိပစ္စည်းနှင့် igg ရောဂါကာကွယ်သောပဋိပစ္စည်းအတွက် ပေါ့စတစ်ဖြစ်နေခြင်း၊ သို့မဟုတ် နက်ဂတစ်မှ ပေါ့စတစ်ဖြစ်သွားသော sars-cov-2-သီးခြား igg ရောဂါကာကွယ်သောပဋိပစ္စည်းပြောင်းလဲမှု၊ သို့မဟုတ် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်သောအဆင့်တွင် အထက်ပါ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုအဆင့်၌ ≥4 ဆ မြင့်တက်လာခြင်း။
&quot;afirst lab survey revealed that as of calendar week 12/2020atotal of at least 483,295 samples were tested up to and including week 12/2020 and 33,491 samples (6.9%) tested positive for sars-cov-2.in israel, researchers at technion and rambam hospital developed and testedamethod for testing samples from 64 patients simultaneously, by pooling the samples and only testing further if the combined sample is found to be positive.in wuhanamakeshift 2000-sq-meter emergency detection laboratory named &quot;&quot;huo-yan&quot;&quot; (chinese: 火眼, or &quot;&quot;fire eye&quot;&quot; in english) was opened on5february 2020 by bgi, which can process over 10,000 samplesaday. &quot;
ပထမဆုံး ဓါတ်ခွဲခန်း စစ်တမ်းကို sars-cov-2 စမ်းသပ်တွေ့ရှိမှု 33,491 နမူနာများ(6.9%) နှင့် 12/2020 ရက်သတ္တပတ် အပါအဝင် 12/2020 ပြက္ခဒိန် ရက်သတ္တပတ် တွင် စုစုပေါင်း 483,295 တစ်ရှူးနမူနာများကို ထုတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အစ္စရေးတွင် technion နှင့် rambam ဆေးရုံရှိ သုတေသနမှူးများက လူနာ 64 ဦးထံမှ နမူနာများကို တချိန်တည်း တပြိုင်တည်းတွင် စမ်းသပ်ရန်အတွက် နည်းလမ်းကို ဖော်ထုတ် စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ နမူနာများကို စုပေါင်းလိုက်ပြီး စုပေါင်း နမူနာတွင် ရောဂါပိုးရှိကြောင်းပြမှသာ နောက်ထပ် စမ်းသပ်မှုများကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝူဟန်တွင် “huo-yan” (တရုတ်လို 火眼 နှင် အင်္ဂလိပ်လို “fire eye- မီးမျက်လုံး”) ဟု အမည်ပေးထားသော တစ်ရက်လျှင် နမူနာပေါင်း 10,000 အထိ လုပ်ဆောင်နိုင်သော စတုရန်းမီတာ 2000 အရေးပေါ် ဓါတ်ခွဲရှာဖွေ‌ရေး ဓါတ်ခွဲခန်းကို bgi က 2020 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
human ace2 was found to beareceptor for sars-cov-2 as well as sars-cov.
လူ့ ace2 သည် sars-cov-2 နှင့် sars-cov များအတွက် လက်ခံနေရာတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
&quot;on 12 april, the government stated that the contact tracing app was in an advanced stage of development, and would be available for deployment within weeks.a similar app is planned in ireland, and in france (&quot;&quot;stopcovid&quot;&quot;).&quot;
&quot;ထိတွေ့မှု ခြေရာခံ အက်ပ် ဖန်တီးရေးသားမှုသည် နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်နေပြီး ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အတွင်း စတင်အသုံးပြုမည်ဟု အစိုးရက ဧပြီလ 12 ရက်နေ့က ကြေညာခဲ့သည်။ အလားတူအက်ပ်ကို အိုင်ယာလန်နှင့် ပြင်သစ်တွင် စီစဉ်လျက်ရှိသည် (&quot;&quot;ကိုဗစ်ရပ်&quot;&quot;)။&quot;
the samples of breast milk, amniotic fluid, cord blood and neonatal throat swab were tested for sars-cov-2, and all results were negative.in another study on 15 pregnant women, majority of the patients presented with fever and cough, while laboratory tests yielded lymphocytopenia in 12 patients.
မိခင်နို့ရည်နမူနာ၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်အရည်၊ အချင်းသွေးနှင့် မွေးကင်းစကလေး၏လည်ပင်းမှနမူနာအရည်တို့ကို sars-cov-2 စစ်ဆေးမှုအတွက် အသုံးပြုခဲ့ကာ၊ ရလဒ်အားလုံးမှာ နက်ဂတစ်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ အခြားသောလေ့လာမှုတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည် 15 ဦးကို လေ့လာရာ၌၊ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများ၌ မိဘ 12 ဦးတွင် လင်ဖိုဆိုက်တိုပနီးယား ဖြစ်နေပြီး မိဘအများစုသည် အဖျားရှိကာ ချောင်းဆိုးကြပါသည်။
whereas civets and other animals in the markets have been found to harbour viruses identical to sars-cov, immediate intermediate hosts for sars-cov-2 have not been identified.
စင်စစ်အားဖြင့် ကြောင်ကတိုးနှင့် ဈေးတွင်းရှိအခြားတိရိစ္ဆာန်များတွင် sars-cov နှင့် တစ်ထပ်တည်းတူညီသည့် ဗိုင်းရပ်စ်များ လက်ခံထားကြောင်းတွေ့ရှိရပြီး sars-cov-2 အတွက် တိုက်ရိုက်ကြားခံ လက်ခံကောင်များကိုမူ ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
they might beadead-end host for sars-cov-2-related beta-covs, similar to civets in the case of sars-cov.
၎င်းတို့သည် ကြောင်ကတိုးနှင့်ဆက်စပ်သည့် sars-cov- နှင့်အလားတူ sars-cov-2 နှင့် ဆက်စပ်သည့် beta-covs နှင့်အတွက် လမ်းဆုံးလက်ခံကောင် ဖြစ်နိုင်သည်။
an unbiased genome-wide screening of host dependency and restriction factors for sars-cov-2 using the state-of-the-art technology of crispr might be fruitful.
ဘက်လိုက်မှုမရှိသည့် ဗီဇမျိုးစိတ်အနှံ့စစ်ဆေးမှုအတွင်း sars-cov-2 အတွက် ရောဂါလက်ခံနေရာ တည်မှီမှုနှင့် ကန့်သတ်ချက်အကြောင်းအရာများကို crispr ၏ အဆင့်အမြင့်ဆုံးကို အသုံးပြုလျှင် အကျိုးများနိုင်မည်။
ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ဇန္နဝါရီ 31 ရက်တွင် ရောမတွင် တရုတ် ခရီးသွား နှစ်ဦးကို sars-cov-2 ပိုးရှိကြောင်းစမ်းသပ်တွေ့ရှိသောအခါ အီတလီတွင် ကူးစက်မှုများ ရှိနေကြောင်း အတည်ပြုသည်။
the envelope spike (s) glycoprotein binds to its cellular receptors angiotensin-converting enzyme2(ace2) and dipeptidyl peptidase4(dpp4) for sars-cov and mers-cov, respectively, and then membrane fusion occurs.
sars-cov နှင့် mers-cov တွင် envelope spike(s) ဂလိုင်ကို ပရိုတင်းသည် ၎င်း၏ ကလာပ်စည်းလက်ခံသူများဖြစ်သည့် အန်ဂျီအိုတန်ဆင် ကွန်ဗာ့တင်း အင်ဇိုင်း2(ace2) နှင့် ဒဲ့ပါ့ပ်တီဒိုင်း ပပ်ပီဒေ့စ် 4(dpp4) တို့ထံတွင် အသီးသီး တွဲကပ်နေပြီးနောက် ပေါင်းစပ်အမြှေးပါး ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
poterant (Latin>Français)mai kal hee bata sakti hu (Hindi>Anglais)si usted quiere enseñar (Espagnol>Latin)ever (Anglais>Allemand)iv (Malais>Norvégien)fizikal (Malais>Chinois (simplifié))googl traduction (Français>Arabe)numer telefonu (Polonais>Islandais)또봐요 (Coréen>Anglais)ex cinere ab ignis (Latin>Anglais)impiorum (Latin>Maori)角膜局所所見異常 (Japonais>Anglais)kelas pemulihan (Malais>Anglais)floatglaswerks (Allemand>Espagnol)meets expectations (Anglais>Malais)i fatti (Italien>Arabe)upprättas (Suédois>Anglais)salamat sa lahat ng kabaitan mo sa akin (Tagalog>Anglais)sparrenbos (Néerlandais>Français)引き上げまたはダウンするかどうか (Japonais>Allemand)xnxn (Français>Anglais)curto tudo (Portugais>Anglais)orang baru (Anglais>Malais)sweet shop (Gallois>Anglais)speak soon (Italien>Anglais)